UkuThengiswa kwePropati kunye nePropathi | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
UkuThengiswa kwePropati kunye nePropathi
Sinikezela ngenkuthalo ebonakalayo kubathengi baseDatshi nabamazwe aphesheya abatyala imali kwiindawo ezahlukeneyo zepropathi eNetherlands, ezinje ngehotele, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, iiprojekthi zorhwebo kunye neepotifoliyo zokuhlala.
Umthetho wokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ubandakanya zonke izinto ezisemthethweni malunga nepropathi engenakushenxiswa. Si- Law & More banokukunceda ngeengcebiso zomthetho xa kuvela imibuzo okanye iimbambano malunga nokuthengwa kunye nokuthengiswa kwepropathi engenakususwa. Ukongeza koku sinokukubonelela ngeengcebiso zomthetho kwicandelo lomthetho werenti.
Ngaphaya koko, abathengi baseDatshi nabamazwe aphesheya kwe Law & More bayancedwa kwaye bayacetyiswa ekumiselweni kutyalo-mali lwabo lokuthengiswa kwezindlu kunye nolwazwelonke ngezona ndlela zenzelwa irhafu ngokusebenzisa indlela yolawulo oluninzi. Ubungcali bethu bufikelela ekufumaneni indawo yokuhlala ukuze isetyenziselwe abucala ukuxoxa ngakwicala lezorhwebo kunye nokuthengiswa kwezindlu nomhlaba.
Law & More inceda abaqeshi kunye nabanini bomhlaba ukuthintela nokusombulula iingxaki zomthetho. Kunye nerenti yendawo yokuhlala kunye nerenti yesakhiwo sevenkile kunye nesakhiwo seofisi. Abaqeshi kunye nabanini bomhlaba banemisebenzi ekhethekileyo yomthetho. Ezi ziqulathe umlinganiso olawula okuthetha ukuba amaqela anokuwatshintsha endaweni yawo izivumelwano zakho. Ukongeza, kukho izibonelelo ezinyanzelekileyo ngaphakathi komthetho werenti. Umntu akanokwahluka kule mithetho, ophambili azimisele ukukhusela umqeshisi njengoko ililungu elibuthathaka, ngemvumelwano. Ukuba ubekwe kwimeko apho umlingane wakho angahambi ngokwezivumelwano zakhe, kukho amanyathelo aliqela anokuzama. Kwiimeko ezinjalo ungasithemba usibonelela ngengcebiso yezomthetho oyifunayo.
Ukuyilwa kwesivumelwano sokuqeshisa ukuba ungumnini-ndawo
• Iimpikiswano malunga nenkcazo yesivumelwano
• ukuthatha amanyathelo ukuba umqeshi okanye umnini-ndlu akenzi ngokuhambelana nezivumelwano ezenziwe
Ukupheliswa kwesivumelwano sokuqeshisa